Nehemaya 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
13 N’ụbọchị ahụ, a gụpụtara+ ihe dị n’akwụkwọ+ Mozis ná ntị ndị mmadụ; a chọpụtakwara na e dere n’ime ya na onye Amọn+ na onye Moab+ agaghị abata n’ọgbakọ ezi Chineke ruo mgbe a na-akaghị aka,+
2 n’ihi na ha abịaghị nye ụmụ Izrel ihe oriri+ na mmiri,+ kama ha goro Belam+ ka ọ kọchaa ha.+ Otú ọ dị, Chineke anyị mere ka nkọcha ahụ ghọọ ngọzi.+
3 O wee ruo na, ozugbo ha nụrụ iwu ahụ,+ ha malitere ịkpọpụ+ ìgwè mmadụ dum gwara ọgwa n’etiti Izrel.
4 Tupu nke a, Elayashib+ onye nchụàjà nke na-ahụ maka ebe a na-eri ihe+ nke dị n’ụlọ Chineke anyị bụ onye ikwu Tobaya;+
5 o wee kwadebere ya nnukwu ebe a na-eri ihe,+ bụ́ ebe ha na-edebebu àjà ọka,*+ frankinsens na arịa dị iche iche nakwa otu ụzọ n’ụzọ iri nke ọka, mmanya ọhụrụ+ na mmanụ,+ bụ́ ihe ndị e kwesịrị ịdị na-enye ndị Livaị+ na ndị na-abụ abụ na ndị nche ọnụ ụzọ ámá, nakwa onyinye a na-enye maka ndị nchụàjà.
6 N’oge a niile, anọghị m na Jeruselem, n’ihi na n’afọ nke iri atọ na abụọ+ nke ọchịchị Atazaksis+ eze Babịlọn, m bịakwutere eze, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, m rịọrọ eze ka o nye m oge.+
7 M wee bịa Jeruselem ma hụ ihe ọjọọ Elayashib+ mere n’ihi Tobaya+ site n’ịkwadebere ya ebe a na-eri ihe n’ogige ụlọ+ ezi Chineke.
8 Ọ dịkwa njọ nke ukwuu n’anya m.+ M wee si n’ebe ahụ a na-eri ihe tụpụsịa+ ngwongwo niile dị n’ụlọ Tobaya n’èzí.
9 E mesịa, m nyere iwu, ha wee mee ka ebe ahụ a na-eri ihe+ dị ọcha;+ m wee bughachi arịa dị iche iche+ nke ụlọ ezi Chineke n’ebe ahụ, ha na àjà ọka na frankinsens.+
10 M wee chọpụta na e nyebeghị ndị Livaị òkè+ ha, nke mere na onye ọ bụla n’ime ndị Livaị na ndị na-abụ abụ, bụ́ ndị na-arụ ọrụ, gbagara n’ubi nke ya.+
11 M wee malite ịkatọ+ ndị osote onye na-achị achị,+ sị: “Gịnị mere e ji leghara ụlọ ezi Chineke anya?”+ M wee kpọkọta ha ma mee ka ha guzo n’ebe ha kwesịrị iguzo.
12 Ma Juda dum webatara otu ụzọ n’ụzọ iri+ nke ọka+ na nke mmanya ọhụrụ+ na nke mmanụ+ n’ụlọ nkwakọba ihe.+
13 M wee nye Shelemaya bụ́ onye nchụàjà nakwa Zedọk bụ́ ọkà n’idepụta ihe na Pedaya onye Livaị ọrụ ilekọta ụlọ nkwakọba ihe ahụ; Henan nwa Zakọ nwa Matanaya+ nọkwa n’okpuru ha, n’ihi na a hụrụ na ha bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi;+ ọ bụkwa ọrụ ha ikesara ụmụnne ha ihe.+
14 Chineke m, biko, cheta m+ n’ihi ihe a, ehichapụkwala+ omume obiọma* m mere n’ihe banyere ụlọ+ Chineke m na nlekọta m na-elekọta ya.
15 N’ụbọchị ndị ahụ, ahụrụ m ndị na-azọchapụta mmanya n’ụbọchị izu ike+ na Juda, ndị na-ebubatakwa ikpo ọka, na-ebukwasịkwa+ ha n’elu ịnyịnya ibu,+ tinyere mmanya, mkpụrụ vaịn na mkpụrụ fig+ na ụdị ibu niile, wee na-ebubata ha na Jeruselem n’ụbọchị izu ike;+ m wee gbaa àmà megide ha n’ụbọchị ha rere ihe oriri.
16 Ndị Taya+ bikwa n’obodo ahụ, ha na-ebubata azụ̀ na ụdị ngwá ahịa+ niile ma na-eresị ụmụ Juda ahịa n’ụbọchị izu ike n’ime Jeruselem.
17 M wee malite ịkatọ ndị Juda a ma ama,+ sị ha: “Gịnị bụ ihe ọjọọ a unu na-eme, ọbụna na-emerụ ụbọchị izu ike?
18 Ọ́ bụghị otú a ka nna nna unu hà mere,+ Chineke anyị wee mee ka ọdachi a dum dakwasị anyị,+ dakwasịkwa obodo a? Ma unu na-eme ka iwe dị ọkụ ọ na-eweso Izrel dịkwuo ukwuu site n’imerụ ụbọchị izu ike.”+
19 O wee ruo na, ngwa ngwa ọchịchịrị gbara n’ọnụ ụzọ ámá Jeruselem tupu ụbọchị izu ike eruo, m nyere iwu ozugbo, e wee mechie ibo ya niile.+ M kwukwara ka ha ghara imeghe ha ruo mgbe ụbọchị izu ike gasịrị; m mekwara ka ụfọdụ n’ime ndị na-ejere m ozi guzo n’ọnụ ụzọ ámá ka a ghara ibubata ibu ọ bụla n’ụbọchị izu ike.+
20 Ya mere, ndị ahịa ahụ na ndị na-ere ụdị ngwá ahịa niile rahụrụ ná mpụga Jeruselem ugboro abụọ.
21 M wee gbaa àmà+ megide ha, gwakwa ha, sị: “Gịnị mere unu ji na-arahụ n’ihu mgbidi a? Unu mee ya ọzọ, m ga-ebi unu aka.”+ Malite n’oge ahụ gaa n’ihu, ha abịakwaghị n’ụbọchị izu ike.
22 M wee gwa ndị Livaị+ na ha ga na-eme onwe ha ka ha dị ọcha+ mgbe niile, na-abatakwa, na-eche ọnụ ụzọ ámá nche+ iji doo ụbọchị izu ike nsọ.+ Chineke m, biko, chetakwa+ nke a iji meere m ihe ọma, meekwara m ebere dị ka obiọma+ gị si dị ukwuu.
23 N’ụbọchị ndị ahụ, m hụkwara ndị Juu lụrụ+ ndị inyom Ashdọd,+ Amọn na Moab.+
24 Ọkara ụmụ ha na-asụ asụsụ ndị Ashdọd, ọ dịghịkwa otu n’ime ha maara otú e si asụ asụsụ ndị Juu,+ kama ha na-asụ asụsụ nke ndị dị iche iche.
25 M wee malite ịkatọ ha na ịkọcha ha+ na iti ụfọdụ n’ime ndị ikom ha ihe+ na ifopụ ntutu isi ha na ime ka ha jiri Chineke ṅụọ iyi,+ sị: “Unu ekenyekwala ụmụ ha ndị ikom ụmụ unu ndị inyom, unu alụtakwarala ụmụ unu ndị ikom ụmụ ha ndị inyom, unu alụkwala ụmụ ha ndị inyom.+
26 Ọ́ bụghị n’ihi ihe ndị a ka Sọlọmọn eze Izrel ji mehie?+ N’etiti ọtụtụ mba, ọ dịghị eze dị ka ya;+ ọ bụkwa onye Chineke ya hụrụ n’anya,+ Chineke wee mee ya eze Izrel dum. Ọbụna ya onwe ya ka ndị inyom ọ lụtara ná mba ọzọ mere ka o mehie.+
27 Ọ́ bụghị ihe na-azụ ntị wuruwuru na unu na-eme ihe a niile dị oké njọ site n’imeso Chineke anyị omume ekwesịghị ntụkwasị obi site n’ịlụ ndị inyom mba ọzọ?”+
28 Otu n’ime ụmụ ndị ikom Joyada+ nwa Elayashib+ nnukwu onye nchụàjà bụ ọgọ Sanbalat+ onye Bet-horọn.+ N’ihi ya, m chụpụrụ ya n’ebe m nọ.+
29 Chineke m, biko, cheta ha, n’ihi mmerụ ha merụrụ+ ọrụ nchụàjà na ọgbụgba ndụ+ nke ọrụ nchụàjà na nke ndị Livaị.+
30 M wee sachapụ+ ihe ọ bụla si mba ọzọ n’ahụ́ ha, kenyekwa ndị nchụàjà na ndị Livaị ọrụ, onye nke ọ bụla n’ọrụ ya,+
31 ọbụna ibute osisi+ n’oge a chọrọ ya na iweta mkpụrụ mbụ kara aka.
Chineke m, biko, cheta m,+ imere m ihe ọma.+
^ Neh 13:5*
^ Neh 13:14*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D16%26Chapter%3D13%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl